dimanche, 20 octobre 2019 21:47
Bakalôrea 2019: 58,31% an’i Fianarantsoa no taham-pahafahana fanadinana ambony indrindra
42,75% ny taham-pahafahana fanadinana bakalôrea namarana iny taom-pianarana 2018-2019 nanerana an’i Madagasikara. Ny faritanin’i Fianarantsoa no ambony indrindra ny taham-pahafahana 58,31%, nanaraka azy ny faritanin’i Toliara (47,42%), fahatelo nanana taham-pahafahana ambony ny faritanin’Antananarivo (40,56%), arahin’ny faritanin’i Mahajanga (38,57%) sy Antsiranana (37,93%). Ny faritanin’i Toamasina kosa no nanana taham-pahafahana bakalôrea ambany indrindra 33,74%.
Manana safidy ireo mpiadina rehetra tsy afaka tamin’ny bakalorea ankapobeny andiany voalohany, na hiatrika na tsia ny « deuxième session exceptionnelle », hanomboka ny alarobia 23 oktobra ka hatramin’ny 26 oktobra 2019. Averina avokoa ireo taranja rehetra ankoatra ny taranja ara-panatanjahantena, hoy ny fanamafisana nataon’ny Ministeran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa.
Tsy misy taratasy fiantsoana vaovao fa ny teo aloha ihany no hampiasaina amin’ity « deuxième session exceptionnelle » ity, ary tsy hiova ny ivon-toeram-panadinana.
dimanche, 20 octobre 2019 19:46
« Découverte » – « Kôpi Kôlé » 2019 : Nibata ny fandresena i Mamiana sy « Rossy »
Fampisehoana lehibe tao amin’ny Coliseum Antsonjombe-Antananarivo no nanakatona ny fifaninanana « Découverte » sy « Kôpi Kôlé » taona 2019, nokarakarain’ny fahitalavitra tsy miankina TV Plus Madagascar.
Nambabo ny fon’ny mpijery sy ny mpitsara ary ny mpanatrika ny famaranana i Mi-Dera Glôpôpôpy avy ao Antsirabe, ka izay no voafidy ho « Coup de cœur » teo amin’ny sokajy « Découverte » tamin’ity fifaninanana ity. Nandrombaka ny fandresena tamin’io sokajy « Découverte » kosa i Mamiana. Ity tovovavy ity no zandriolona indrindra tamin’ireo mpifaninana niatrika ny famaranana ; 14 taona i Mamiana.
Fa nambabo ny fon’ny mpijery sy ny mpitsara ary ny mpanatrika ny famaranana ny sokajy « Kôpi Kôlé » tamin’ity andiany 2019 ity i Hery avy any Moramanga, nanao « Kôpi Kôlé » Jaojoby. Nandrombaka ny « Kôpi Kôlé 2019 » i Ra-Tin avy any Fianarantsoa, « Kôpi Kôlé Rossy».
dimanche, 20 octobre 2019 19:34
Mahajanga: Tovolahy 21 taona maty dobo an-drano teo amin'ny « Village Touristique »
Tovolahy iray avy ao Antananarivo tonga teo Mahajanga, isan’ireo mpizaika namonjy lasy « Mega Camporee » an'ny Fiangonana Advantista teto an-drenivohitry ny Faritra Boeny, nanomboka tamin'ny alatsinainy 14 oktobra 2019 lasa teo ary nifarana omaly sabotsy 19 oktobra 2019.
Androany alahady 20 oktobra 2019, tolakandro tamin'ny 2 ora sy sasany, no nisehoan'ny loza. Nandeha nitsangatsangana sy hividy voandalana satria tokony hiainga tamin'ny 5 ora hariva teo. Efa nahalala mialoha ry zareo hoe tsy tokony hisehana eo amin'ny « Village Touristique » rehefa tolaka ny andro, saingy nanontany olona indray raha ny fitantaran'ny namany niara-nilomano taminy ary nilaza ireto farany fa tsy mampaninona akory ny milomano eo ka dia resy lahatra izy ireo.
Niakatra tampoka anefa ny ranomasina teo amin'ny faritra nilomanosany raha ny fanazavana hatrany ka izay no nahavoa azy. Mbola tafakatra tety an-tanety, saingy teny an-dalana hamonjy hopitaly no tsy tana ny ainy.
dimanche, 20 octobre 2019 18:12
Big MJ: Hafa kely ny nankalazany ny faha-32 taonany
« Tsingerintaona nahaterahako androany 20 oktobra », hoy i Big MJ ao amin’ny pejiny facebook. Faniriany ny hiara hifaly sy hiara hisakafo amin’ny olona rehetra, saingy ho sarotra izany hoy ity mpanakanto zanak’Antalaha ity.
Nitety toerana samihafa i Big MJ, androany, nizara pizza sy sandwitch tamin’ireo olona sahirana, nanamarihana izao fankalazany ny faha-32 taonany izao.
Toetranaina Parfait no tena anarany, Big MJ kosa no anarana maha mpanakanto ahafantaran’ny maro azy.
dimanche, 20 octobre 2019 17:43
Andavamamba-Antananarivo: Nirehitra ny trano, may ny fiara
Nitrangana haintrano teto Andavamamba, manoloana ny Alliance Française io atoandro io. Niainga tao anaty trano ny afo, dia niitatra tamin’ireo fiara amidy mitoby amin’ny tany malalaka manolotra azy mandrampahatonga ny mpamonjy voina an’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra.
Sahirana ny mpamonjy voina tamin’ny famonjena noho ny fanelingelenan’ireo olona sy fiara mijanona nitaza-maso ny afo miledaleda, nibahana ny lalan’izy ireo. Tsy nitandro hasasarana kosa ireo Zandary sendra ity loza ity, fa nifanome tanana tamin’ireo niharam-boina sy ireo nanolo-tena nanomo afo sy nanosika ny fiara afaka nakisaka tsy ho tratry ny afo.
Efa voafehy ny afo.
dimanche, 20 octobre 2019 15:41
Fafah Mahaleo: Nodimandry androany teo amin’ny faha-65 taonany
Namoy ny rahalahy, mpikambana mpiara-mamorona ny tarika Mahaleo. Nodimandry ny marainan’ity alahady 20 oktobra 2019 ity, teo amin’ny faha-65 taonany Rajaonarison Famantanantsoa na Fafah araka ny ahafantaran’ny maro azy.
Efa narefo fotoana lavalava, misava mirakotra ny fahasalaman’i Fafah, antony tsy nahafahany niaka-tsehatra niaraka tamin’ireo namany tamin’ny fampisehoana nataon’ny tarika Mahaleo, tao Antsahamanitra ny 13 oktobra 2019.
Ao amin’ny tranompaty HJRA Ampefiloha ny nofo mangatsiakany.
dimanche, 20 octobre 2019 15:27
Village Touristique – Mahajanga: Y’a urgence
Le « Village Touristique » fait la fierté de Mahajanga, elle est l’un des sites très fréquentés par les touristes nationaux qu’internationaux venus appréciés la beauté de la cité des fleurs.
Le « Village Touristique » accueille des animations culturelles et compétions sportives tel le « Big Sôma », mais à y regarder de plus près, certaines infrastructures du front de mer et la promenade sont endommagées ; donc il y a urgence à se soucier.
dimanche, 20 octobre 2019 15:09
Ambanja: Valo volana tsy nandray karama, mitaraina ireo mpampianatra FRAM « subventionné »
Mitaraina ireo mpampianatra FRAM « subventionné » mikambana amin’ny fikambanan’ny mpampianatra FRAM anatin’ny Distrikan’Ambanja noho ny tsy mbola nahazahoan’izy ireo tambinkarama ; efa-bolana ho an’ny sasany (1er bimestre sy 4e bimestre), valo volana ho an’ny hafa.
Misy amin’izy ireo anefa no efa niasa ho an’ny fanjakana nandritra ny folo taona mahery teo amin’ny sehatry ny fanabeazana.
dimanche, 20 octobre 2019 14:44
Antsirabe: Tetikasa maromaro no hatomboka
Ahazo « Campus Universitaire » miaraka amin’ireo fitaovana manaraka ny toetr’andro hahatonga azy ho oniversite manara-penitra Antsirabe. Eny amin’ny tany malalaky ny Piste Vatofotsy no hametrahana ny fotodrafitr’asa, ary amin’ny fidiran’ny taom-pianarana manaraka dia efa azon’ny mpianatra hianarana.
Hapetraka ny fitaovana eny Ambatofinandrahana Andrefan’Ivohitra mba hampakarana ho 700m3 isan’ora ny tahan’ny rano fisotro madio azo jifaina eto Antsirabe, raha 450m3 isan’ora izany ankehitriny. Hovitaina mialohan’ny faran’ny taona ny asa.
Hisy ny fametrahana « Parc de panneau solaire » ary hamoaka angovo 5MW ka ny « Université annexe » eny Tsaratanana – Vinaninkarena no hisitraka izany voalohany.
dimanche, 20 octobre 2019 11:14
Toamasina: Nohavaozina ny Biraom-paritry ny tanora sy fanatanjahantena Atsinanana
Nohavaozina hiverina amin'ny maha biraom-panjakana azy ankehitriny ny biraom-paritry ny tanora sy fanatanjahantena, na DRJS Atsinanana. Izany dia vokatry ny fiaraha-miasan'ny minisitry ny tanora Tinoka Roberto, sy ireo mpiandraikitra ny tanora aty amin'ny Faritra, tamin'ny tsy miankina, ka nanampy tamin'ny fanarenana ilay birao ny SPAT (Société du Port à Gestion Autonome de Toamasina) sy ny SMMC (Société de Manutention des Marchandises Conventionnelles) ary ny Etablissement Rakoto Jean Paul.
Vita ny trano ankehitriny ary mendrika ny maha biraom-panjakana azy.